Fihetsika valo ho an'ny Photoshop izay tsy azonao adino | Famoronana an-tserasera
Fihetsika valo ho an'ny Photoshop izay tsy azonao adino
Tena nanjary ny hetsika ho an'ny Photoshop fitaovana tena tsara rehefa voadinika tsara izy ireo ary amin'izao fotoana izao dia tsy dia misy milaza firy momba izay ananan'ny Photoshop fahaiza-manao amin'ny indray mipy maso fotsiny ary amin'io lafiny io dia tsy misy holazaina intsony momba ny hetsika ho an'ny Photoshop, izay mahay manatsotra ny zava-drehetra amin'ny fotoana asehony endrika hafa.
Amin'ny ankapobeny, maro amin'ireo hetsika ho an'ny Photoshop no mamela azy ireo aseho amin'ny fomba somary tsotra endrika hafa amin'ny alàlan'ny fanohanana izay namolavolana azy, na boky, tavoahangy, kaopy, magazine, na zavatra hafa.
1 Ilay fitaovana Photoshop mahavariana
2 Hetsika ho an'ny Photoshop
3 Hetsika Photoshop amin'ny rano
5 Photoshop Action lafiny
6 Hetsika Photoshop Artista
Ilay fitaovana Photoshop mahavariana
Ho fanampin'izay, ho hitanao ny tsirairay amin'ireo fanohanana tadiavinao, izay azo antoka fa havaozina rehefa mandeha ny fotoana; Toy izany koa afaka mahita azy ireo ianao amin'ny vahaolana avo lenta, amin'ny lafiny samihafa sy amin'ny tranga sasany, amin'ny alàlan'ny iPad, azo atao ny manao azy amin'ny toerana samy hafa tanana mba hanahafana ny hetsika.
Hetsika ho an'ny Photoshop
Matetika dia azo atao ny mahita hetsika maro ho an'ny Photoshop izay manana kalitao avo lenta ary manana ny maha-izy azy manokana ny famelana hanova ny sary tena izy ho lasa sary tonga lafatra, mba hanomezana fikitika hafa an'ireo tranonkala sy sary.
Mahagaga, SevenStyles vao haingana no natomboka, hetsika vaovao sasantsasany nahavita nisarika ny sain'ny maro izay, rehefa manandrana azy ireo, dia afa-po, satria ny valiny farany dia tena mahagaga tokoa.
Fanamarihana: Ny hetsika tsirairay izay holazainay etsy ambany dia PremiumNa izany aza, ny vidin'ny tombontsoa aroson'izy ireo dia mendrika, satria amin'ny vola iray azonao ianteherana fitaovana miasa azo ampiasaina indrayNa dia nandany fotoana kely aza ny mpamorona azy ireo hanamboarana azy ireo dia homeny anao ny fotoana hitahiry azy isan'andro ampiasanao azy ireo.
Hetsika Photoshop amin'ny rano
Na dia marina aza fa misy maro vokatra izay misy ifandraisany amin'ny vokatry ny rano, tsy isalasalana fa ity dia heverina ho iray amin'ireo tsara indrindra, satria manana safidy hafa maro izy ireo rehefa mampihatra ny vokany, na inona na inona ampiharina amin'ny sary feno aseho, amin'ny sary iray na raha ampahany fotsiny aminy no ampiharina. mahazo merge Tena tsara.
Izy io dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra. Izany dia fitambarana loko tena tsara Amin'ny alalany no ahafahana mamorona vokatry ny setroka, jiro ary na dia fifantohana mahavariana sasany aza.
Photoshop Action lafiny
Raha efa nahita ilay sarimihetsika antsoina hoe “Dr. Hafahafa "dia azo inoana fa io vokany io dia mampatsiahy anao ireo fotoana nidiran'ilay mahery fo tamin'ny tifitra hafa. Azo antoka fa momba izany vokany tena tratra tsara.
Hetsika Photoshop Artista
Hetsika izay misy be dia be ny fahasamihafana amin'ny fomba sy ny endrika kanto, izay hanome anao fotoana hampiasa fitaovana isan-karazany izay hamorona vokatra tsy mampino amin'ny asanao tsirairay.
Raha te-hanova ny sary na ny saripika ho sary maoderina ianao dia azo inoana fa izany no asa ilainao hahatratrarana izay tianao.
Toy ny misy tsara vokatry ny rano, ity vokadratsin'ny afo tsy mampino ity dia tsy tokony hajanona, izay ahafahanao mamorona lelafo mahatalanjona ary mifoka sigara mihitsy aza, sady mitambatra no mifangaro miaraka amin'ireo zavatra aseho amin'ny sary amin'ny fomba tena izy.
Hetsika mahatalanjona mamela izany mampihatra singa maromaro amin'ny sary.
Na dia tsy iray amin'ny anjaran'i SevenStyles aza izany, raha ny marina mendrika ny ho anisan'ity lisitra itysatria manana kalitao tsara sy vokany tsy mampino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Fihetsika valo ho an'ny Photoshop izay tsy azonao adino
Export Photoshop Layers Amin'ny alàlan'ny fisie tsirairay
Inona no dikan'ny famolavolana fanontana?